Category:Noble Gas - Gpedia, Your Encyclopedia
Neefta Gobta (Noble Gas)
Neefaha Gobta (ingiriis: Noble Gas) waa guuto curiyeyaal neef ah kuwaas oo leh astaamo kimiko isku mid ah.
Marka xaalada caadiga ah dhamaantood waa hawo bilaa ur, bilaa midab ah kuwaas oo leh falgal hooseeya.
Neefaha gobta ah waa lixda curiye ee guruubka 18aad ee Diwaanka Curiye kuwaas oo kala ah: Hiliyaam (He), Niyoon (Ne), Aargon (Ar), Kiribtoon (Kr), Siinoon (Xe) iyo curiyaha radioactiveka ah Raadhoon (Rn).
Hab-dhaqanka neefaha gobta ah waxaa lagu ogaan karaa dersida qaabdhismeedka atomkooda, qolofkooda sare iyo isku dhisyada ay sameeyaan. Barta dhalaalida iyo kululeynta neefahan waa mid isku dhow taas oo ka hooseysa 10 °C (18 °F); taas micnaheedu waa farqi yar oo heerkul ah ayay dareere ku noqon karaan.
Niyoon, Aargoon, Siinoon, iyo Kiribtoon waxaa laga soo dhex saaraa hawada cirka, halka hiliyaamta laga dhex helo neefaha dabiiciga ee shidaalka laga soo saaro.
Maqaalkan waa la bilaabay. Hadii aad wax ka taqaanid fadlan ku caawi Gpedia in aad Wax ku dartid. Qoraalkaagu ha noqdo mid faa'iido leh oo dhexdhexaad ah.
► Bir La Mood‎ (6 B)
► Bir la mood‎ (10 C, 115 B)
► Bir Ma Ahe‎ (10 C, 112 B)
► Birta Alkali‎ (10 C, 111 B)
► Chalcogen‎ (5 C, 48 B)
► Guruubyada Diwaanka Curiye‎ (6 C, 84 B)
► Halogen‎ (10 C, 107 B)
► Millan‎ (7 C, 88 B)
► Noble Gas‎ (10 C, 103 B)
► Pnictogen‎ (5 C, 50 B)
Bogagga ku jira qeybta "Noble Gas"
waxaa meeshaan ku jira 103 oo maqaallo ah waxeena ku jiraan qeybtaan, waana 103 gud ahaan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Noble_Gas&oldid=123423"